Saraakiish Sar sare ee Dooxada Shabele oo Baladweyne kula hadlay Shacab isu soo baxay – SBC
Saraakiish Sar sare ee Dooxada Shabele oo Baladweyne kula hadlay Shacab isu soo baxay
Saraakiil sar sare oo ka tirsan Maamulka Dooxada Shabeele ayaa maanta kula hadlay shacab aad iyo aad u tiro badan oo isugu soo baxay magaalada Baladweyne xarunta gobolkaasi hiirana kaas oo ay ku taageerayeen Maamulkaas oo dhowaan la wareegay gacan ku heynta Magaaladaasi.
Saraakiishaasi la hadashay shacabka waxaa horkacayay Madaxweynaha Maamulkaasi ninka lagu magacaabo C/fataax Xasan Afrax, waxaana uu shacabka u jeediyay Qudbad dhinacyo badan taamaneysa taas oo uu ugu horeyn ugaga mahad celiyay Shaacabweynaha Baladweyne sida ay u soo dhaweeyeen iyo taageerada ay u hayaan.
Waxa uu sidoo kal ka hadlay arimo ku aadan hadaladii dhowaan ka soo yeeray wasiirka koobaad ee Dowlada KMG ah ee Soomaaliya kaas oo ku aadanaa in Gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyne ay qabsadeen Ciidamada DKMG ah balse aan jirin maamulk la dhaho dooxada shabeele oo la wareegay, isagoona sheegay in taasi uu ku raacsanyahay ka maamul ahaana ay iyagu taageersan yihiin Xukuumada FKMG ah ee Soomaaliya.
Shacab aad u farabadan oo boqolaal ku u dhaafaya ayaa isugu soo baxay Bartamaha Baladweyne iyagoona ruxayay caleemo qoyan iyo astaamo uu ka mid yahay Calanka Buluuga ah ee Soomaaliya ee Xidigta dhexda ku leh, waxaana ay isugu soo urureen Saldhiga dhexe ee Boliska Magaaladaasi halkaas oo ay kula hadleen Madaxda Maamulka Baladweyne ku sugan .
Sikastaba ha ahaatee waa markii ugu horeysay oo ay Banaan bax shacuurtooda ku muujiyaan shacabweynaha magaalada Baladweyne tan iyo intii ay gacanta ku dhigeen magaaladaas Ciidamo Itoobiyaan ah iyo maamulkaasi la baxay dooxada Shabeele Maalmo kooban ka hor.